Igunya-iMagnesium L-Threonate Supplements: Izibonelelo, Isikali
Ikhaya > Isongezelelo seMagnesium L-Threonate
Ukuba ufuna into entle Magnesium L-Threonate isongezelelo, Sincoma ukuthenga i-Magnesium Threonate powder kwiCofttek. Inkampani ibanga ukuba iyonyusa ukungafumaneki kwe-magnesium emzimbeni. Inkampani ikwatsho ukuba umgubo obonelelwe yinkampani ngenkxaso yememori kunye nokwenza ngcono umsebenzi wokuqonda. Banceda abasebenzisi ukuba balale ngcono. Cofttek ngababoneleli beMagnesium L-Threonate abaya kukuthengisa kuphela ngempumelelo ephezulu iimveliso.
Yintoni iMagnesium L-Threonate?
Isebenziselwa ntoni i-magnesium L?
Ngaba i-magnesium Threonate ibhetele?
Ngaba i-magnesium Glycinate ingcono kune-mag nesium citrate?
Ngawaphi amayeza ongafanele uwathathe nge-magnesium?
Ngaba i-magnesium yenza i-poop?
Zingaphi mg wemagniziyam L Ndizithathile?
Yeyiphi iMagnesium efanelekileyo yokuxhalaba?
Ngaba i-magnesium inganceda ngenkungu yengqondo?
Ngaba i-magnesium iyayiphilisa ingqondo?
Ngaba i-magnesium ibangela isifo sengqondo esixhalabisayo?
Ngaba i-magnesium L iyancipha ilungele uxinzelelo lwegazi?
Yeyiphi eyona magnesium efanelekileyo yokuthatha yonke imihla?
Uyintoni umahluko phakathi kwemagnesium citrate kunye nemagnesium gluconate?
Yeyiphi iMagnesium efanelekileyo yeekram cramp?
Ngaba iMagnesium ilungile kwixhala?
Yeyiphi iMagnesium efanelekileyo yokulala?
Zeziphi izinto zokutya eziphakamileyo kwimagnesium?
Zithini iziphumo zexesha elide zokuthatha i-magnesium?
Ngaba yonke i-magnesium ibangela urhudo?
Ithatha ixesha elingakanani ukusebenza kwemagniziyam L?
Ngaba i-magnesium ibangela i-Alzheimer's?
Zithini iimpawu zemagniziyam ephantsi?
Ngaba ivithamin D inokuthintela i-Alzheimer's?
Yeyiphi iMagnesium eyona ilungileyo kwimithambo?
Ngaba kungcono ukuthatha i-magnesium kusasa okanye ebusuku?
Ngaba iMagnesium ilungile kwimithambo ecinyiweyo?
Ngaba i-magnesium inganceda ukuthuthumela?
Ngaba iMagnesium ilungile kwiParkinson?
Zeziphi iimpawu zemagniziyam ephantsi emzimbeni?
Ngaba i-turmeric iyanceda isifo sikaParkinson?
Yintoni ebuhlungu isifo Parkinson?
Ngaba i-magnesium iyayichaphazela imemori?
Ngaba i-magnesium iyanceda ngeoksijini?
Ngaba i-magnesium inyusa i-serotonin?
Ngaba i-magnesium inika amandla?
Yeyiphi eyona magnesium L ilungileyo?
Kutheni magnesium glycinate ngcono?
Ngaba i-magnesium Glycinate efanayo ne-magnesium?
Ngaba i-magnesium Glycinate iyakunceda?
Yintoni unyango ngemagniziyam glycinate?
Yintoni ongafanele uyithathe ngemagniziyam?
Kufuneka ungayithathi nini i-magnesium?
Ndazi njani ukuba ndisezantsi kwimagnesium?
Ndiza kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokulala?
Zeziphi iivithamini ongafanele uzithathe kunye?
Ngaba i-magnesium L Threonate ilungile kwixhala?
Loluphi uhlobo lwemagniziyam olungeyona ilungileyo?
Ndingathatha ixesha elide ngemagniziyam?
Imagnesium ikuchaphazela njani ukuhamba kwamathumbu?
Kukangaphi ngosuku kufuneka uthathe i-magnesium?
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokufumana i-magnesium?
Kutheni le nto sifuna iMagnesium L-Threonate?
Yintoni iMagnesium L-threonate Side Effect?
Zithini izibonelelo zeMagnesium L-threonate?
Ndingayithenga phi i-magnesium L?
Ngaba i-calcium kunye ne-magnesium kufuneka zithathwe kunye okanye ngokwahlukeneyo?
I-asidi ye-Threonic sisinyibilikisi esinyibilikayo emanzini esifunyenwe kwisifo se-Vitamin C. Xa i-threonic acid idibanisa ne-magnesium, yenza ityuwa ebizwa ngokuba yi-Magnesium L-threonate. I-Magnesium L-threonate ifunxwa ngokulula ngumzimba kwaye ke, yenye yeendlela eziphambili zokwenza i-magnesium ifikelele kwiiseli zobuchopho kunye namanye amalungu omzimba. Imagniziyam ebonelelwe yi-Magnesium L-threonate isebenza ngemisebenzi ebalulekileyo ye-biochemical, kubandakanya ukwenziwa kweevithamini ze-B, ukugcinwa kwe-insulin, ukwenziwa kwe-ATP kunye neprotein kunye nokwenziwa kwe-acid enamafutha. Le minerali ikwadlala indima ephambili ekusebenzeni ngokukuko kokusebenza kwee-enzymes ezininzi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, inyusa ukusebenza kwamajoni omzimba ngokwandisa intsholongwane kunye ne-anti-tumor iziphumo zeeseli zombulali zendalo kunye ne-cytotoxic T-lymphocyte.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, i-magnesium inokufumaneka ngokutya okutyebileyo ngokwemvelo kwizimbiwa. Okunye ukutya okune-magnesium ngesixa esikhulu yitshokholethi emnyama, iiavokhado, amandongomane, iimbotyi, itofu, ithanga kunye nembewu ye-chia, iintlanzi ezinamafutha, njlnjl. yiyo loo nto imfuno yeMagnesium L-threonate supplements inyuke kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
I-Magnesium L-Threonate iluncedo ekulawuleni ukuphazamiseka kwengqondo. Iyeza lonyusa uxinzelelo lwe-magnesium kwiiseli zobuchopho.
Ukuthengwa kweMagnesium L-Threonate kungenxa yezibonelelo zayo ze-nootropic. Ikhulisa inkumbulo ye-episodic, ukufunda, kunye nokuphucula uxinzelelo. Isongezelelo yidosi kagqirha kwizigulana ezinengxaki yokulahleka kwememori, i-ADHD, isifo sengqondo esixhalabisayo, kunye nesifo se-Alzheimer's.
Eyona nto ephambili inzuzosYeMagnesium L-Threonate kukuphuculwa kwememori. Iyakwazi ukuphucula uxinano lwe-synaptic kunye neplastiki kunye nokwandisa inani elipheleleyo leendawo zokukhutshwa kwe-neurotransmitter ngaphakathi kwengqondo.
Olu ncediso luyakwazi ukuphucula imemori yendawo. Kwisifundo esinye somgangatho, inkumbulo yokusebenza iphuculwe nge-13% emva kweentsuku ezingama-24 zokuthatha iMagneisum L-Threonate. Emva kweentsuku ezingama-30 zokuncedisa, iigundane esele zikhulile zikwazile ukwenza kwinqanaba elifanayo nabalingane babo abancinci.
Oku kuthetha ukuba ngelixa olu ncediso lukwazi ukuphucula ukusebenza kwengqondo kwizifundo zolutsha nakwabadala, luphucule ngakumbi kubantu abadala. Ngapha koko, iigundane ezindala zabona inqanaba lokuphuculwa kwe-19%, ebalulekileyo xa kuthelekiswa nokuphuculwa kwe-13% kwiigundane ezincinci. Ngenxa yokuba abantu abadala banokubakho ekubandezelekeni yimemori, esi songezelelo sinefuthe elinamandla kubantu abadala.
Imagnesium L-threonate inokuba yeyona fomu ifanelekileyo yemagniziyam kuwe ukuba ujonge ukuphucula impilo yengqondo ngakumbi. Ngelixa inokuphakamisa ngokubanzi amanqanaba e-magnesium kuwo wonke umzimba, iziphumo zinokuba namandla ngakumbi kwingqondo ngale ndlela ye-magnesium.
Ngelixa zininzi iindlela ze-magnesium ezikhoyo, sihlala sikhetha ukusebenzisa i-magnesium citrate kunye / okanye ne-magnesium glycinate. I-Magnesium citrate iluncedo kakhulu kubantu abaphethwe kukuqhinwa, ngelixa ifom ye-glycinate iluncedo ngakumbi kwiimeko ezinje ngexhala, ukuqaqanjelwa sisisu, uxinzelelo olungapheliyo kunye neemeko zokukrala.
Ukuthatha i-magnesium ngala mayeza kunokubangela ukuba uxinzelelo lwegazi luye phantsi kakhulu. Amanye ala mayeza abandakanya i-nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), kunye nabanye.
I-Stool Softener: I-Magnesium idonsa amanzi emathunjini, isebenza njenge-osmotic laxative. Olu konyuka emanzini luvuselela ukuhamba kwamathumbu. Ikwathambisa kwaye yonyuse ubungakanani besitulo, ibangela intshukumo yamathumbu kwaye incede ekwenzeni izitulo kube lula ukudlula.
I-Magnesium L-threonate sisiyobisi somlomo kwaye inokuthathwa nokuba kukwipilisi okanye ngomgubo. Idosi echanekileyo yeMagnesium L-threonate okanye ichiza ixhomekeke kubudala nakwimpilo yomntu oyithathayo kunye nenjongo yokuthatha ichiza. Ngokubanzi, abasetyhini abaneminyaka ephakathi kwe-19 nama-30 bayacetyiswa ukuba banamathele kumthamo we-310 mg ngosuku kwaye amadoda akwinqanaba elifanayo kufuneka abambelele kumda wokulinganisa we-400 mg ngosuku. Amadoda amadala angonyusa idosi yawo ukuya kwi-420 mg ngosuku kwaye abasetyhini abakwelo qela leminyaka kufuneka badle i-360 mg yeMagnesium L-threonate yonke imihla ngeziphumo ezilungileyo. Abasetyhini abancancisayo banokulisebenzisa eli chiza. Nangona kunjalo, kufuneka bagcine ukutya kwabo kwemihla ngemihla kweMagnesium L-threonate engaphantsi kwama-320 mg ngosuku.
Ukuba uthatha i-Magnesium L-threonate kwiimeko ezithile, kuya kufuneka uhlengahlengise umthamo wakho ngokubhekisele kwinto elithathwa kuyo iyeza. Umzekelo, ukuba uthatha i-Magnesium L-threonate kwimiba enxulumene nokumba, uyacetyiswa ukuba uthathe i-400-1200 mg yonke imihla. Ukuba uthatha isongezelelo sokukhulisa umsebenzi wokuqonda, kufuneka usebenzise i-1000 mg ye-Magnesium L-threonate yonke imihla. Ukulala kakuhle, i-400-420 mg ye-Magnesium L-threonate yanele amadoda kwaye i-310 ukuya kwi-360 mg yanele kwabasetyhini.
I-Magnesium ihlala ibotshelelwe kwezinye izinto ukuze yenze kube lula emzimbeni ukuba uyifunxe. Iindidi ezahlukeneyo zemagniziyam zahlulwe ngokwezinto zokubopha. Iindidi ezahlukeneyo zemagniziyam zibandakanya:
Magnesium glycinate. Ihlala isetyenziselwa ukunciphisa iintlungu zemisipha.
Magnesium oxide. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukunyanga i-migraine kunye nokuqhaqha.
I-Magnesium citrate. Ifunxwe ngokulula ngumzimba kwaye ikwasetyenziselwa ukunyanga ukuqhina.
Magnesium chloride. Ifunxwe ngokulula ngumzimba. S
Magnesium sulfate (Epsom ityuwa). Ngokubanzi, ngokulula ifunxwa ngumzimba kodwa inokufunxwa eluswini.
I-Magnesium lactate. Ihlala isetyenziswa njengesongezo sokutya.
Ngokwe-2017 yokuphononongwa kwezifundo, uninzi lwezifundo ezifanelekileyo kwimagniziyam kunye noxinzelelo zisebenzisa i-magnesium lactate okanye i-magnesium oxide. I-Magnesium glycinate ithathe ngokulula kwaye inokuba neepropathi zokuthomalalisa. Inokukunceda ukunciphisa uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokuqaqanjelwa bubuthongo. Nangona kunjalo, ubungqina benzululwazi kolu setyenziso bunqongophele, ke kufuneka uphando oluninzi. I-Magnesium glycinate ihlala isetyenziselwa iziphumo zayo zokuthomalalisa ukunyanga uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokulala.
Ngokwesiqhelo kubhekiswa njengenkungu yengqondo, ukuqonda kancinci okanye ubunzima ekugxininiseni nakwimemori konke kunokubonisa ukusilela kwe-magnesium. I-Magnesium sisondlo esibalulekileyo kwingqondo, ke ngaphandle kwayo ingqondo ayinakuyenza nayo.
I-Magnesium isebenza njengomgcini-sango kwii-receptors ze-NMDA, ezichaphazelekayo ekukhuleni kwengqondo okunempilo, inkumbulo kunye nokufunda. Ithintela iiseli zemithambo-luvo ekubeni zonganyelwe, ezinokubabulala kwaye zinokubangela ukonakala kwengqondo.
Isifundo esitsha esipapashwe kwiphephancwadi iNeurology sicebisa ukuba amanqanaba aphezulu kakhulu kwaye asezantsi kakhulu wemagniziyam anokubeka abantu emngciphekweni wokuba nesifo sengqondo esixhalabisayo.
Olu hlobo lwe-magnesium lunokungena egazini kwaye luwele kuthintelo lobuchopho begazi, luthathwa ngokulula ziiseli kwaye kuye kwangqinwa ukuba kunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye nokuthintela ukubethwa.
I-Magnesium citrate yenye yezona zinto zixhaphakileyo kwimagnesium kwaye inokuthengwa ngokulula kwi-Intanethi okanye kwiivenkile kwihlabathi liphela. Olunye uphando lubonisa ukuba olu hlobo luphakathi kweendlela ezininzi ezingafumanekiyo ze-magnesium, okuthetha ukuba ithathe indawo yokugaya ngokulula kunezinye iindlela.
I-Magnesium citrate iluncedo kakhulu kubantu abaphethwe kukuqhinwa, ngelixa ifom ye-glycinate iluncedo ngakumbi kwiimeko ezinje ngexhala, ukuqaqanjelwa sisisu, uxinzelelo olungapheliyo kunye neemeko zokukrala.
Magnesium I-citrate inokuba lolona hlobo lusebenzayo ukuba ufuna ukuzama isongezelelo. Ukuba uswele i-magnesium, kunokubakho ezinye izibonelelo ngokwandisa ukungenisa kwakho esi sondlo. Kwaye amanye amayeza ayafumaneka ekubambeni umlenze okunokunceda.
Uphando lubonisa ukuba ukuthatha i-magnesium yoxinzelelo kunokusebenza kakuhle. Izifundo zifumanise ukuba uloyiko kunye noloyiko lunokuncitshiswa kakhulu ngokutya kakhulu kwemagniziyam, kwaye iindaba ezimnandi zezokuba iziphumo azikhawulelwanga kukuphazamiseka koxinzelelo ngokubanzi.
I-Magnesium glycinate ihlala isetyenziswa njengesongezo sokutya esizimeleyo ukuphucula ukulala nokunyanga iimeko ezahlukeneyo zokudumba, kubandakanya isifo sentliziyo kunye neswekile. Magnesium glycinate ifunxwa ngokulula kwaye inokuba neepropathi zokuthomalalisa. Inokukunceda ukunciphisa uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokuqaqanjelwa bubuthongo.
Ngaphandle kokuthatha iMagnesium L-threonate ukuphucula amanqanaba e-magnesium kwingqondo yakho, unokusebenzisa ukutya okunotye kwezi minerali. Oku kutya kunokukunceda ufumane amanqanaba e-magnesium afunekayo engqondweni yakho kwaye wonwabele zonke izibonelelo zamaminerali. Nazi ezinye ze I-Magnesium L-threonate kukutya;
Itshokholethi emnyama- nokuba imnandi kwaye isempilweni, ithwala i-64mg ye-magnesium eyi-16% ye-RDI. Ngaphandle kwalonto, itshokholethi emnyama ikwacebile ngobhedu, isinyithi, kunye nemanganizi kunye nefayibha prebiotic.
Iiavokhado- esi siqhamo simnandi nesinempilo sinokunika i-58mg ye-magnesium emalunga ne-15% ye-RDI. Iziqhamo zikwacebile ngeevithamini B, K, kunye nomthombo omkhulu we potassium.
INutsare- ikwayaziwa njengeyona ndawo ibalaseleyo yeMagnesium L-threonate imithombo yendalo. I-ounce enye ekhonza i-cashews ine-1mg magnesium eyi-82% ye-RDI.
Legumessuch- njengee-ertyisi, iilentile, iichickpeas, kunye neembotyi zesoya zityebile kwizimbiwa ezahlukeneyo, kubandakanya nemagniziyam. Umzekelo, ikomityi enye yeembotyi eziphekiweyo ine-120mg yemagniziyam, yiyo ke i-30% ye-RDI.
I-Magnesium sisondlo esidinga umzimba ukuze uhlale usempilweni. Ukuthatha iMagnesium ixesha elide kubalulekile kwiinkqubo ezininzi emzimbeni, kubandakanya ukulawula ukusebenza kwemisipha kunye nemithambo-luvo, amanqanaba eswekile yegazi, kunye noxinzelelo lwegazi kunye nokwenza iiprotein, ithambo kunye ne-DNA.
Iifomathi zemagniziyam zixhaphakileyo ukubangela urhudo zibandakanya i-magnesium carbonate, i-chloride, i-gluconate, kunye ne-oxide. Urhudo kunye nefuthe le-laxative ye-magnesium salts zibangelwa ngumsebenzi osmotic weetyuwa ezingafakwanga emathunjini nakwikholoni kunye nokukhuthaza kwesisu esiswini.
Ukufakwa ngomlomo nge-MgT kubonisiwe ukuthatha ubuncinci kwinyanga enye yokunyusa amanqanaba e-magnesium engqondo kwinqanaba elifunekayo lokuba nefuthe ekwakhiweni kwememori.
Ukuba namanqanaba emagniziyam aphezulu kakhulu okanye asezantsi kakhulu anokukubeka emngciphekweni wesifo i-Alzheimer's kunye nezinye i-dementias, abaphandi baseDatshi baxela.
Xa inqanaba le-magnesium emzimbeni liyehla ngaphantsi kwesiqhelo, iimpawu zikhula ngenxa yemagnesium ephantsi. Izizathu eziqhelekileyo ze-magnesium ephantsi zibandakanya:
Ukutsha okuchaphazela indawo enkulu yomzimba
Ukuchama kakhulu (i-polyuria), njengesifo seswekile esingalawulekiyo kunye nokuchacha ukusilela kwezintso
I-Hyperaldosteronism (ukuphazamiseka apho i-adrenal gland ikhupha kakhulu i-hormone aldosterone egazini)
Ukuphazamiseka kwesifo sezintso
I-Malabsorption syndromes, enjengesifo se-celiac kunye nesifo samathumbu esivuthayo
Amayeza afaka i-amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, proton pump inhibitors, kunye ne-aminoglycoside antibiotics
I-Pancreatitis (ukudumba kunye nokudumba kwepancreas)
Uvavanyo lwezilwanyana kunye ne-in vitro lubonisa ukuba ivithamin D inokubakho kunyango olunokuthintela kunye nonyango lokwehla kwengqondo kunye nokudodobala kwengqondo. Izifundo ezibini zakutshanje ezinokubakho zikwacebisa ukuba amanqanaba asezantsi e-25 (OH) D anyusa umngcipheko wokuhla kwengqondo okukhulu.
Umvelisi ubanga ukuba isongezelelo se-magnesium sinceda ekulweni iintlungu zemisipha, ukuphucula umgangatho wokulala, kunye nokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo. Bacacisa kananjalo ukuba le fomu yemagniziyam (i-magnesium bisglycinate) intle esiswini kunezinye iindlela zezimbiwa.
Izongezo zeMagnesium zinokuthathwa nangaliphi na ixesha losuku, ukuba nje uyakwazi ukuzithatha ngokungaguquguqukiyo. Abanye, ukuthatha izinto zokuqala ekuseni kunokuba lula, ngelixa abanye banokufumanisa ukuba ukubathatha ngesidlo sangokuhlwa okanye ngaphambi nje kokuba balale kusebenza kubo.
I-Magnesium-yiminerali ebalulekileyo kwimpilo yenkqubo yemithambo kunye nokunciphisa ukudumba.
Izibonelelo zeMagnesium (Mg) zibonisiwe ukuba ziphucula kakhulu ukubuyiswa kokusebenza kwezifo ezahlukeneyo ze-neurological. Izibonelelo ezifanelekileyo zokongezwa kweMg kwiziphazamiso zemithambo-luvo azikacaciswa okwangoku.
Iimpawu eziqhelekileyo zokunqongophala kwemagnesium zibandakanya ukujija kwemisipha, iinyikima kunye neekram. Nangona kunjalo, izongezo akunakulindeleka ukuba zinciphise ezi mpawu kubantu abangenanto.
Isifundo sokuqala seParkinson sifumana ifom yeMagnesium ukuze ifikelele kwiBongo yokuCothisa iMoto, Ilahleko yeNeuronal
Iimpawu zokuqala zemagnesium zibandakanya:
Njengoko ukusilela kwe-magnesium kuya kusiba, iimpawu zinokubandakanya:
isingqisho sentliziyo esingaqhelekanga
Kuphononongo olupapashwe kwiMvavanyo yoNyango kunye noNyango, abaphandi bafumanise ukuba i-turmeric inokukhusela inkqubo ye-neva kwiityhefu ezichaphazelekayo ekubangeleni ukonakala kwenkqubo yesifo kwisifo sika-Parkinson.
Utshintsho kunyango, usulelo, ukungabikho kwamanzi emzimbeni, ukulala, ukuhlinzwa kutshanje, uxinzelelo, okanye ezinye iingxaki zonyango zinokuzenza mandundu iimpawu zePD. Usulelo lwe-Urinary tract (nokuba ngaphandle kweempawu zesinyi) sesona sizathu siqhelekileyo. ICEBISO: Amanye amayeza anokuzenza mandundu iimpawu zePD.
Isifundo esitsha sicebisa ukuba ukwandisa ukutya kwakho kwemagniziyam, iminerali ebalulekileyo efumaneka kwimifuno enamagqabi amnyama kunye neziqhamo ezithile, iimbotyi kunye namandongomane, kunokunceda ekulweni imemori engahambelaniyo nokuguga.
Enye yeendima ezibaluleke ngakumbi kukunceda ukwakha unyamezelo ngokwandisa amandla eoksijini omzimba. Kodwa iyanceda: Uxinzelelo lwegazi olusempilweni.
Uphando lubonisa ukuba ukongeza nge-magnesium kunokunceda ukwandisa amanqanaba e-serotonin. Ngapha koko, amanqanaba asezantsi e-serotonin aye aqatshelwa kwizigulana ezinesiphene semagniziyam. Isifundo esixoxe ngokukhulisa i-serotonin nge-magnesium sixele impumelelo.
IMagnesium idlala indima ebalulekileyo emzimbeni, njengokuxhasa ukusebenza kwemisipha kunye ne-nerve kunye nemveliso yamandla. Amanqanaba e-magnesium asezantsi awabangeli zimpawu kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, amanqanaba asezantsi angapheliyo anokunyusa umngcipheko woxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo sentliziyo, uhlobo lweswekile 2 kunye ne-osteoporosis.
Ubungakanani beNdalo yokuCoca iiGummies.
NGOKU Ukutya kweMagnesium Citrate njengeVapsules.
I-Vitafusion Magnesium Gummy iivithamini.
Ulwandiso loBomi i-Neuro-Mag Magnesium L-Threonate.
IMagtein Magnesium L-Threonate.
I-BioSchwartz Magnesium Bisglycinate.
Ukufunxa okuphezulu kweGqirha ngokuGqwesileyo okuphezulu kwiipesenti ezili-100 kwiipilisi zeMagnesium.
I-Magnesium glycinate ibonakalisiwe ukuba inezibonelelo ezahlukeneyo, kubandakanya oku kulandelayo: Inesiphumo sokuthomalalisa kwingqondo yakho ngenxa yobukho be-glycine. Inokukunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye nokukhuthaza ukulala okungcono. Kuyanceda ukugcina amathambo omelele ngokugcina uxinano lwamathambo asempilweni.
Zininzi iindlela ze-magnesium ezikhoyo, sihlala sikhetha ukusebenzisa i-magnesium citrate kunye / okanye ne-magnesium glycinate. Ifom ye-Magnesium glycinate iluncedo ngakumbi kwiimeko ezinje ngoxinzelelo, ukungalali, uxinzelelo olungapheliyo kunye neemeko zokukrala.
I-Magnesium glycinate lolunye uhlobo olukhulu lwe-magnesium yokulala. Yeyona fomu ifunxwe kakuhle kakhulu yemagniziyam, kwaye ithambile kwisisu, ngenxa yoko akunakufane kwenzeke ukuba ube neziphumo zesisu okanye ucaphukise isisu sakho.
Eli yeza longezelelwa ngamaminerali elisetyenziselwa ukukhusela nokunyanga amanani asezantsi e-magnesium egazini. Ezinye iimveliso zisetyenziselwa ukunyanga iimpawu zesisu esine-asidi esiswini njengokukhathazeka sisisu, isitshisa, kunye ne-asidi indigestion.
Nangona izongezo zemagniziyam zithathwa njengezikhuselekileyo, kuya kufuneka ujonge umboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba uzithathe-ngakumbi ukuba unempilo. Isongezelelo samaminerali sinokungakhuselekanga kubantu abathatha i-diuretics, amayeza entliziyo, okanye amayeza okubulala iintsholongwane.
Hlola nomboneleli wakho wezempilo ukuba uthatha nawaphi na amayeza ngaphambi kokuba uthathe i-magnesium. Iingozi. Abantu abanesifo seswekile, isifo samathumbu, isifo sentliziyo okanye isifo sezintso akufuneki bathathe i-magnesium ngaphambi kokuba bathethe nomboneleli wabo wezempilo.
Olunye lweempawu zokuqala zokusilela kwe-magnesium kuhlala kukudinwa. Unokuqaphela ukuphazamiseka kwemisipha, ubuthathaka okanye ukuqina ngokunjalo. Ukuphulukana nomdla kunye nesicaphucaphu zezinye zeempawu eziqhelekileyo kumanqanaba okuqala. Nangona kunjalo, ngekhe uqaphele naziphi na iimpawu kwasekuqaleni.
Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa izongezo zemagniziyam njengesixhobo sokulala, sicebisa ukuba uthathe iiyure eziyi-1-2 ngaphambi kokuba ulale. Cinga ukongeza i-magnesium kwindlela yakho yokulala.
Iidosi ezinkulu zeeminerali zinokukhuphisana ukuba zifunxwe. Sukusebenzisa i-calcium, zinc, okanye izongezo zemagniziyam ngaxeshanye.
I-Magnesium L Threonate Ukuphakamisa kunokuphucula imeko, uxinzelelo kunye nokunciphisa uxinzelelo. Ngaphaya koko, iphepha elahlukileyo elapapashwa kwiphephancwadi lePain Physician lafumanisa ukuba i-magnesium L-threonate ithintela kwaye ibuyisela umva imemori enxulumene nentlungu engapheliyo ye-neuropathic.
Iifom ye-magnesium enyibilika kakuhle kulwelo ifunxwe ngokupheleleyo emathunjini kuneendlela ezinganyibilikiyo. Izifundo ezincinci ziye zafumanisa ukuba i-magnesium kwi-aspartate, i-citrate, i-lactate, kunye ne-chloride iifom zifakwe ngokupheleleyo kwaye zifumaneka ngakumbi kune-magnesium oxide kunye ne-magnesium sulfate.
Imithamo engaphantsi kwama-350 mg yonke imihla ikhuselekile kuninzi lwabantu abadala. Kwabanye abantu, i-magnesium inokubangela isisu ukuphazamiseka, isicaphucaphu, ukugabha, urhudo, kunye nezinye iziphumo ebezingalindelekanga. Xa ithathwa ngesixa esikhulu (ngaphezu kwe-350 mg yonke imihla), i-magnesium inokwenzeka ukuba ayikhuselekanga.
I-Magnesium yinto ebalulekileyo yezimbiwa ebandakanyekayo kwiinkalo ezininzi zempilo yakho. I-National Academy of Medicine icebisa ukuba ingagqithi kwi-350 mg yemagniziyam eyongezelelweyo ngosuku. Nokuba uthatha i-magnesium ukuphucula umzimba wakho ngalo naliphi na ixesha losuku, okoko unako ukubathatha ngokungaguquguqukiyo.
ukunciphisa okanye ukunqanda ukutya okune-calcium eneeyure ezimbini ngaphambi okanye emva kokutya ukutya okune-magnesium.
ukunqanda izongezo zedosi ephezulu.
unyango lwe-vitamin D.
ukutya imifuno eluhlaza endaweni yokupheka.
I-Magnesium yiminerali ebalulekileyo kwaye umzimba uyisebenzisa kwiindlela ezahlukeneyo zokuphendula ze-metabolic ezingama-300. Ikwangowesine ubukhulu obuninzi emzimbeni womntu. Umzimba usebenzisa i-magnesium kulawulo loxinzelelo lwegazi, ukosuleleka kwemisipha, ukuhanjiswa kwesiginali ye-nerve kunye nemveliso yamandla. Njengoko i-magnesium iyiminerali ebaluleke kangako, ukunqongophala kwayo kungakhokelela kwizifo ezahlukeneyo, kubandakanya i-migraines, isifo seswekile-2 seswekile, ukuphazamiseka kwemvakalelo kunye nezifo zentliziyo ezahlukeneyo. Ngelixa le minerali inokufumaneka kwizibonelelo ezahlukeneyo zendalo, kubandakanya imifuno, amandongomane, iimbewu kunye neesum, isibini kwisithathu sabantu behlabathi sibaswele. Kungenxa yoko, abantu bahlala becetyiswa ukuba basebenzise i-magnesium ngohlobo lwezixhasi. Olunye uhlobo longezo lwe-magnesium olufumene ukuthandwa okukhulu kwixa elidlulileyo iMagnesium L-threonate.
Kule nqaku, sikuxelela yonke into eyaziwayo malunga neMagnesium L-threonate kwaye kutheni kufuneka uyisebenzise. Ke funda ngoku.
Uphando lubonisa ukuba iMagnesium L-threonate ikhuselekile kwaye inyamezelwe kakuhle ngumzimba xa uthathwa kwimithamo yethamo lingaphantsi kwama-350 mg ngosuku. Nangona kunjalo, ukunyuka kwe-Magnesium L-threonate ulahleko kunokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga, njengokucaphuka, ukugabha, njalo-njalo. I-Magnesium L-threonate, xa ithathwa isisixa esikhulu, yonyusa ukwakhiwa kwe-magnesium ngaphakathi komzimba, ekhokelela kwiimeko ezinje ngexinzelelo legazi elisezantsi, ukunyuka kwenqanaba lentliziyo, ukunciphisa ukuphefumla, njl .njl. Magnesium L-threonate isongezelelo. Eli chiza likhuselekile kubafazi abakhulelweyo nabancancisayo kunye nabantwana xa lithathwa kwiidosi eziphantsi.
Makhe sijonge ezinye zeenzuzo zeMagnesium L-threonate kwaye sizame ukuqonda ukuba kutheni lo mthombo wemagniziyam uthanda ukuthandwa kangaka.
① I-Magnesium L-threonate Ngokufanelekileyo Ukulwa i-ADHD
Esinye sezizathu eziphambili zokuthandwa kweMagnesium L-threonate kukukwazi kwayo ukuphucula amanqanaba emagnesium kwingqondo. Kuba le tyuwa ifunxwa ngokulula ngumzimba, yindlela esebenzayo yokwenza i-magnesium ifikelele kwiiseli zobuchopho. IMagnesium idlala indima ephambili ekomelezeni impilo yokuqonda- iyakwazi ukubuyisela umva iimpawu zokuguga kwengqondo, ezinje nge-ADHD okanye ukuphazamiseka kwengqondo. Kuba i-ADHD yimeko ethatha ixesha ukukhula, abantu abaqondi ukuba bane-ADHD de ifikelele kwinqanaba apho kuye kube nzima ukujongana nako. I-Magnesium L-threonate, ke, idlala indima ebalulekileyo ekunyuseni impilo yengqondo, ngakumbi kwimeko yabantu abadala kunye nokugcina i-ADHD kude. (1). Ilanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
Sisikhumbuzo esimangalisayo kunye nokuNcedisa okuQinisekisayo
Xa abantu bekhula, ingqondo yabo iqala ukuncipha ngobungakanani. Oku kwenzeka ngenxa yokulahleka kwee-synapses kunye neziphumo zokwehla kwengqondo okuhambelana nobudala. Izifundo zophando ezenziweyo kwiminyaka edlulileyo zibonise ukuba iMagnesium L-threonate iphucula uxinano lweesinxibelelanisi ngaphakathi kwengqondo, okuthi kukhokelele kwimemori engcono kunye nokusebenza kwengqondo. Ngamazwi alula, i-magnesium enikezwe nguMagnesium L-threonate inokubuyisela ukuguga kwengqondo kwaye ke, iphakamise impilo yengqondo, ngakumbi kubadala.
Inceda ukulwa noxinzelelo kunye noxinzelelo
Uxinzelelo kunye noxinzelelo ziye zaba ziqhelekileyo iingxaki. Umsinga wokungaqiniseki owenziwe yi-COVID-19 bhubhane okwenze ukuba le micimbi ixhaphake kunakuqala. Izifundo zibonise unxibelelwano oluthile phakathi kwe-magnesium kunye nokudakumba kunye noxinzelelo. Kuba i-magnesium iyayichaphazela ngqo inkqubo yovalo, inokumenza umntu azole kwaye aphumle. Ke, i-magnesium L-threonate inokudlala indima ebalulekileyo ekupheliseni uxinzelelo kunye noxinzelelo.
④ Ikhulisa iMithambo yezeMpilo kunye neMisipha
Ukunqongophala kweMagnesium kukwadityaniswa namathambo kunye nezihlunu ezibuthathaka kunye nokuxinana. Ke, abantu abanesifo samathambo bahlala becetyiswa ukuba bathathe iMagnesium L-threonate njengesongezelelo se-magnesium. Ngapha koko, le ityiwa isoloko icetyiswa njengokwenza amayeza okunciphisa iintlungu.
⑤ I-Magnesium L-Threonate inceda abantu ukuba balale ngcono
Izifundo ezininzi zophando zibonise ukuba umntu ukuze alale ngokufanelekileyo kufuneka abe nenani elifanelekileyo le-magnesium emzimbeni wakhe. I-Magnesium iyenza isebenze inkqubo ye-parasympathetic system, ehlaziya umzimba wonke. Okubaluleke ngakumbi kukuba, i-magnesium idibanisa kunye ne-GABA receptors ngaphakathi komzimba kunye nokuthomalalisa inkqubo yovalo lomntu, ngaloo ndlela ivumela ingqondo nomzimba ukuba uzive ukhululekile. I-Magnesium L-threonate iqinisekisa ukuba kukho i-magnesium eninzi ngaphakathi komzimba ukuqinisekisa ubusuku bokulala ngokuvakalayo.
Ngaphandle kwazo zonke izibonelelo ezichazwe apha ngasentla, iMagnesium L-threonate ikwasetyenziswa kwezinye iinjongo ezahlukeneyo. Le ityiwa inikwa ukunciphisa intlungu emva kwe-hysterectomy. Ikwasetyenziselwa ukukhulula iintlungu zesifuba ezibangelwa yimithambo evalekileyo. Okokugqibela, le yetyuwa ibonakalisiwe ukuba inceda ekulahlekeni kwindlebe, i-fibromyalgia kunye neswekile. Abanye abantu bade bayithathe ukuthoba amanqanaba e-cholesterol yabo.
Ukuba ujonge ukurhwebesha iMagnesium L-threonate supplement, ufuna umthengisi wezinto ezinokuthenjwa nothembekileyo. Ukuba ujonga indawo yokuthenga iMagnesium L-threonate powder ngesixa, thenga eCofttek. Inkampani iyaziwa ngaphakathi kwishishini lezonyango ngenxa yomzekelo wovavanyo lokuhlalutya kunye namandla ophando olusemgangathweni. ICofttek ikwanamaqela olawulo anamava kunye neqela lokuqala le-R & D kunye neengcali ezivela kwihlabathi liphela.
ICofttek yasekwa ngonyaka ka-2008 kwaye kwisithuba nje seminyaka embalwa, inkampani izenzele igama kwizinto ezahlukeneyo, kubandakanya itekhnoloji yokwenziwa, ukuphuculwa kweziyobisi, i-bioengineering, chemistry yezamayeza, njlnjl. Namhlanje, inkampani inabaxhasi eMntla Melika, eIndiya. , I-China ne-Yurophu kunye nomgaqo-nkqubo wayo 'woSiseko soMgangatho, ukuThengwa kwabaThengi kuqala, iNkonzo yokunyaniseka, ukuZuza ngokuBambisana' kuyincedile ekudaleni abathengi abonwabileyo kwihlabathi liphela. Imagnesium L-threonate ebonelelwe yinkampani iza kwiidrama ezingama-25 kgs kwaye imveliso nganye inokuthenjwa ngomgangatho wayo ophezulu. Ke, ukuba ufuna iMagnesium L-threonate powder ngobuninzi, Ivenkile kwi-cofttek.com.
Kuba i-magnesium isebenza ngokusondeleyo kunye ne-calcium, kubalulekile ukuba ube nomyinge ofanelekileyo wazo zombini izimbiwa ukuze zisebenze. Umgaqo olungileyo wesithupha yi-2: 1 calcium-to-magnesium ratio. Umzekelo, ukuba uthatha i-1000mg ye-calcium, kuya kufuneka uthathe i-500mg ye-magnesium.
(1). Ilanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ummiselo wolwakhiwo kunye nokusebenza kokuxinana kwe-synapse ngo-L-threonate ngokumodareyitha koxinzelelo lwe-intraneuronal magnesium. I-Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). UMazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., kunye noHalili, J. (2017). Umsebenzi weCatalase (CAT), i-ALT kunye ne-AST kumacandelo ahlukeneyo eempuku zeSwitzerland zeAlbino ezinyangiweyo nge-Lead Acetate, iVitamin C kunye neMagnesium-L-Threonate. Ijenali yoPhando lweKlinikhi kunye noPhononongo, 11 (11).
(3). IMickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, kunye neeWiles, NR (2013). Ukutya okungapheliyo kwemagniziyam-L-threonate isantya sokuphela kunye nokunciphisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwimeko yencasa yomgangatho. I-Pharmacology Biochemistry kunye nokuziphatha, 106, 16-26.
(4).I-Magnesium l-threonate (778571-57-6).
Indenza ndizive ndigula entlokweni yam. Uya kuzama ukunciphisa idosi
Ndiye ndandisa imemori yexesha elifutshane kunye nexesha elide, kwaye ndiye ndalungelelana ngeendlela ezininzi. Ndikwafumana nokunyusa okuncinci kwe-dopamine kunye nokunyusa okuncinci kwe-testosterone okuhlala kungaguquguquki kwaye kuncipha kuphela. Ukulala kunokuphuculwa ngokwaneleyo ukwenza iiyure ezisi-7 zivakale njenge-9 kodwa i-mag glycinate indidibanisa loo ngxelo kodwa ndisahleli ngasemva, ezinye, ukuphucula ukulala.
IMagnesium L-threonate (MgT) sisicoconutrient esisebenzayo sokuphucula ukusebenza, ingqalelo kunye nenkumbulo ye-episodic, umsebenzi wokuqonda kwengqondo, kunye nokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo.
Abanye oogqirha bacebisa ukongeza i-2000 mg yeMagnesium ukulwa nokudakumba.
Kulungile, ndade ndaqonda ukuba iMagnesium L-Threonate isebenza ngakumbi ekungeneni kwi-BBB (Igazi, iBongo, isithintelo). Oku kulinganiswe ngamanqanaba eMagnesium kulusu lomqolo wobuchopho. Ndiyithatha kwimemori kunye nokudakumba.
Hayi! Eli nqaku alinakubhalwa ngcono kakhulu! Ukujonga le post kundikhumbuza umntu endandihlala naye ngaphambili! Waqhubeka eshumayela ngale nto. Ndizothumela le post kuye. Qiniseka ukuba uya kufunda kakuhle. Enkoso ngokwabelana!
I-theonate indinceda ndilale nzulu.
Ndithathe i-600mg yeAlpha GPC, 300mg yeUrine, kunye ne2,000mg yeMag L-Threonate njengokulala kwam ngoku mva nje kwaye bekusebenza kakuhle. Indenza ndizive 10-25% ngakumbi ukozela. Ndiphinde ndilale ngokukhawuleza xa ndivuka ebusuku.
iinkqubo zobugcisa zotyando esibhedlele
Ulwazi oluncedo. Ngethamsanqa ndifumene iwebhusayithi yakho ndingaqondanga, kwaye ndimangalisiwe ukuba kutheni le ngozi ingenzekanga ngaphambili! Ndiyibhukumse.
Malunga neMagnesium L-Threonate usebenzisa ixesha, i-22% kusasa kunye ne-11% ebusuku isebenza kakuhle.
Ukuba ndithatha ixesha elininzi ngamanye amaxesha kunokuba kukuchasana nengqondo, ezona ziphumo zilungileyo ziba semva kweeveki ezi-2 zilandelelana kwaye ndidla ngokungazisebenzisi ngempumelelo enkulu ekuphuculeni ukusebenza kwedwa kuphela.
Ndibona abantu abaninzi bexela iziphumo ezinjengeentloko, ukungalali, amandla asezantsi njl.
I-thiamine yicofactor yemagniziyam, kwaye idosi ephezulu ye-magnesium inokuhlisa i-thiamine, kunye ne-vica-versa.
Zama ukuthatha i-thiamine (B-1) kunye okanye emva kokuncedisa nge-magnesium, kwaye ubone ukuba ngaba iziphumo ebezingalindelekanga ziyaqhubeka.
Kulungile, kodwa ukuba uyahamba nabo qala kancinci. Ukuba unengxaki yokulala kunye negroggag, mag threonate inokuyithintela ekuqaleni. Andizukuqala ngesiqalo esinconyelweyo kwibhotile, eyi-1000 mg 2 iiyure ngaphambi kokulala kwiveki yokuqala. Njengoko oku kuya kuhlala kukugcina kwindawo yomsi okwexeshana.
Ndithatha ii-1-2gs ngaphambi kokulala kwaye mhlawumbi ikepusi enye ye-500mg kusasa ukuba ndiziva ndonwabile.
Kuyachukumisa ukuba ufumana iingcinga kweli nqaku nakwingxoxo yethu eyenziwe kule ndawo.
I-Magnesium L-Threonate ibangela ukungena kwe-magnesium ukusuka kwisithuba esingaphandle kwithuba lesithuba se-neurons. Oku akwenzeki ngezinye iityuwa zemagniziyam.
Inokukunceda ukulala ngokukhawuleza ukuze iyure e-1 ngaphambi kokulala icetyiswe. Ibhotile yakho yokuncedisa mhlawumbi ifuna iipilisi ezi-3 okanye ezi-4 ngosuku. Kungenxa yokuba i-magnesium threonate ininzi, inxalenye yesithathu ye-molecule inkulu. Yahlula idosi ngemini ukuze wandise ukufunxwa kodwa mhlawumbi ucwangcise ukuba ube nokutya okukhulu emva kwesidlo sakho sokugqibela.
I-L-Threonate ichaphazela ingqondo ngokuthe ngqo ngokungafaniyo nezinye iintlobo zemagniziyam.
Njengoko kuhamba nezinto ezininzi ezinefuthe ngqo kwingqondo kunokubakho ixesha lokuziqhelanisa nayo ukuze uyinike ixesha.
Yintoni eya kubo bonke, imixholo ekhoyo kule webhusayithi iyamangalisa kulwazi lwabantu, ke, qhubeka nomsebenzi olungileyo.
Oko kulala kunye nokukhuthaza ngaphezulu kwako nakuphi na ukulala okungoku onokufumana. Yithathe kuphela kusasa nakwidosi ephantsi yokumodareyitha ukusukela ngoku.
Ukuya kuthi ga kwi-Mag-L-Threonate, ukuqonda kwam kukuba i-L-threonate yeyona nto ihamba phambili kwaye iququzelela ubungakanani obuphezulu be-magnesium ngqo kwingqondo apho inokusetyenziswa zii-neurons? Ngokuqinisekileyo izifundo zibonise ukuba kuyinyani. Andazi ukuba ngaba kukuqhekeza nje okanye akunjalo. Ndikhetha ukuthatha i-L-threonate ukuba ndingayifumana ngobuninzi, ngapha koko ndibambelela kwi-chelate.
Ngokufanelekileyo i-2 gram ye-magnesium L-threonate, ivelisa i-144mg ye-elemental magnesium.
Ifom ye-Threonate ichaze ubuchwephesha ngokukodwa kwaye inokuba yeyona nto isebenzayo ekukhuliseni umxholo we-magnesium yengqondo nangona ine-magnesium encinci kuyo.
Ndiqale ukuthatha imveliso yeMagnesium L-Threonate ebusuku ngaphambi kokulala kwaye wow - emva kweentsuku ezine okanye ezintlanu ndiye ndaqala ukubona ukuphucuka okuncinci ekukhumbuleni, ukugcinwa kwedatha eyahlukeneyo emsebenzini, emva kweeveki ezininzi, ukuphucuka okukhulu apho ndikhumbula khona amagama kunye neenyani ukusukela kwiminyaka eyadlulayo. Phambi kokuthatha le nto, bendisokola ukukhumbula ngokulula izinto ezincinci kwaye zinkulu kwaye ibijongene nokulingeneyo ukuba ndithethe nePCP yam ndaze ndabona iNeurologist ethe yandifumanisa ndikhubazekile "kancinci" kwaye ndade ndagqibezela inani lweemvavanyo zokulawula i-Alzheimer's.
Ndithatha idosi ekucetyiswa ukuba yiifilisi ezintathu ezinikezela nge-144 mg yeMagnesium L-Threonate ebusuku. Oku kuye kwabuguqula ubomi kum.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezibonakala ngathi ziphucule ukulala kwam kwaye ndihlala ndikhumbula amaphupha am ngoku.
Kudala ndithatha i-Magnesium L-Threonate powder malunga neenyanga ezili-10 ngoku, 1.0 - 1.2g mihla le. Ndiyisebenzisa njengesixhobo sokulala, kwaye isebenza ngokumangalisayo. Andinakuthi ndiqaphele naziphi na iziphumo ngaphandle kwalonto.
I-Magnesium L-threonate iyamangalisa. Ungaya kuGoogle ngegama layo leMagtein. Icoca inkungu yengqondo, ikhuphe uxinzelelo, ikuncede ulale, ikwenze ube nobukrelekrele, kwaye incede ngoxinzelelo. Abazali bam bobabini bakwazi ukuphuma kwi-anti-depressants ngokutshintshela eMagtein. Ndiyisebenzisa yonke imihla kwaye ngekhe ndibenayo.
1g-2g iyure enye ngaphambi kokulala. I-500mg yokusetyenziswa kwexesha losuku, ukuba iyafuneka kuxinzelelo. Yenye yezinto ezinokubetha kanye xa sele iphelile, oko kuthetha ukuba ayilunganga kwimveliso ngelixa ikuyo kodwa ukuba iyayiphumlisa ingqondo yakho kwaye ivumela iziyobisi ezenza ukuba ii-receptors ezibhlokileyo zisebenze ngcono xa uMg sele ewenzile umsebenzi. Ngaba iyavakala loo nto? Kungenxa yoko le nto ngaphambi kokulala kukhulu kakhulu, kubangela ukuba uvuke unike ingqondo yakho ikhefu kukhuthazo. Iziphumo ziyanyuka, kodwa damn, ndizive ngokwenene umahluko kusasa emva kokuba ndiqale ukuyithatha, ngokwenene.
I-magnesium eninzi iya kubangela izitulo ezivulekileyo. Uninzi lwethu, ngaphezulu kwama-200 mg ngosuku. Abanye abantu banokunyamezela ngaphezulu kwe-500 mg ye-magnesium eyongezelelweyo ngaphandle kweengxaki.
Idosi ekhuthazwayo kum yi-144 mg ye-elemental (pure) yemagniziyam ngosuku. Abanye abantu bayozela kancinci ekuqaleni, abanye bayaqaphela ukonyuka kokuhamba kwegazi entlokweni, ngelixa abanye benokuphathwa yintloko ethambileyo. T Ukuba uthatha i-magnesium yokuqunjelwa, unokufuna ukuzama ukuqhubeka nedosi yakho yangoku ngelixa usongeza iMg Threonate.
Ukuba uhlakulela izitulo ezivulekileyo, nqunqa kwifom yakho yangaphambili ye-Mg.
I-Magnesium L-Threonate-ayintoni amava akho?
Ngaba ukhona umntu othathe iMagnesium L-Threonate njengesongezelelo? Athini amava akho?
Kudala kangakanani uyithatha kwaye ubenza malini?
Kwakunjani ngaphambi kokuba uqale ukuyithatha, ngelixa wawukuyo, nasemva kokuba uyekile ukuyithatha ukuba uyenzile?
Ndicinga ukuba umlawuli wale ndawo usebenza nzima ekuxhaseni iwebhusayithi yakhe, ngenxa yesizathu sokuba zonke izinto zikwidatha esekwe kumgangatho.
Ndifumanise ukuba iMagnesium L-threonate yeyona nto ibandayo kwaye ijolise kwiziphumo zengqondo, ngelixa i-glycinate ikukuphumla komzimba.
Kufanelekile ukuzama kokubini ngombono wam.
I-Threonate kwifom ye-amino-acid ibonakalisiwe ukuba isebenza njenge-Acetylcholinesterase inhibitor. Ke ukuba une-choline ethe-ethe kwaye uqaphele imeko yokudakumba okanye naziphi na iziphumo ezibi ezivela kwizongezo ezinje ngeHuperzine A, Alpha GPC, mega-doses ye-oyile yeentlanzi, emva koko bendiya kuba neentloni ukuya kwi-Mag Glycinate.
Ngenxa yeendleko, ndayeka ukuzama i-magnesium l-threonate iminyaka.
kodwa kum, Iphucula ukulala kwam, eyona nto ibalulekileyo kukuba inqanaba lokuzola endinokulifezekisa ngosuku emva kokulithatha alunakuthelekiswa nanto.
Andizange ndifumane naziphi na iintlobo zovakalelo / unxunguphalo ezivela kwezinye iindlela zemagniziyam njenge-glycinate, kodwa ngokobuqu ndizifumana kwi-l-threonate.
Imagnesium L-threonate inokuba yeyona fomu ifanelekileyo yemagniziyam kuwe ukuba ujonge ukuphucula impilo yengqondo ngakumbi.
Ngelixa inokuphakamisa ngokubanzi amanqanaba e-magnesium kuwo wonke umzimba, iziphumo zinokuba namandla ngakumbi kwingqondo.
Ezi zinto ziyasebenza, ngakumbi ixesha lokulala kunye nomgangatho.
Ndizamile ezinye iintlobo zeMg kwaye zindinika nje iimbaleki.
Ndithathe iMelatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, akukho namnye usebenza ngokungaguquguqukiyo nangempumelelo njengeL-Threonate form of Mg.
Amava eMagnesium L-Threonate?
Kutshanje ndiye ndathenga iMagnesium L-Threonate kwaye ndingenanto ngaphandle kwamava amnandi ngayo. Unxunguphalo oluncinci, inkungu engaphantsi kwengqondo, ndiziva ngathi 'ngokwam' ngengqondo, njl njl.Ndenza idosi ejikeleze i-1-1.5g yale mihla.
Ndiyazibuza ukuba ukhona umntu onamava afanayo okanye ahlukeneyo ngale fomu yeMagnesium?
I-Magnesium L-Threonate indenza ndiphumle kwaye inceda ukulala kwam.
VULA UVAVANYO LWELEBHAYIBHILE LWE-MAGNESIUM L-UKUFUMANEKA KWABAgULAYO ​​NE-DEMENTIA
E-United States, ziqikelelwa kwizigidi ezi-5.2 izigulo zesifo i-Alzheimer's (AD), kunye ne-AD kunye nezinye i-dementias ezichaphazela phantse umntu omnye kwabathathu abadala. Ngomthwalo onyukayo wezezimali kunye neemvakalelo zokhathalelo lwezigulana, ukufumana unyango olukhuselekileyo nolusebenzayo kubalulekile. Uphando oluvelayo kwiziphumo zokuqonda kweMagnesium L-Threonate (MGT) iphakamisa ukuba ukongezwa kunokuba luncedo kubantu abane-AD. Nangona kulinganiselwe, isilwanyana esele sikhona kunye nedatha yovavanyo lweklinikhi yoluntu ngokubhekisele kwiziphumo ze-neural kunye nengqondo emva kokuncediswa kwe-MGT, inkcazo yemishini yeziphumo ze-MGT iqala ukuvela, kubandakanya nokuphakanyiswa kweendlela zokubonisa iNMDAR. Uvavanyo lwelebheli lwangoku oluvulekileyo luphonononge ukusetyenziswa kwe-MGT kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo. Abaguli abalishumi elinesihlanu bafumana i-1F-FDG-PET imaging, ukuvavanywa kwengqondo, kunye negazi elitsala kwisiseko nakwiiveki ze-3 zonyango ukuze kuvavanywe isiphumo esibi sokuxhaswa kwe-MGT kwi-hippocampal kunye ne-preortal ye-cortex yamandla okuqonda okubandakanya ukusebenza kwesigqeba, ingqalelo, isantya sokuqhubekeka Ukuthetha ngokutyibilikayo nenkumbulo. Ukuvavanywa kwengqondo kunye nokutsalwa kwegazi kwenziwa emva kweeveki ezisi-18 zokuyekiswa kwe-MGT. Iziphumo zibonise ukuphucuka okubonakalayo kwimetabolism ye-cerebral metabolism kunye nokuphuculwa kwesalathiso sehlabathi sokusebenza kwengqondo kwisampulu iyonke emva kweeveki ezili-12 zonyango lwe-MGT. Ukunyuka kwamanqanaba obomvu egazi e-red cell kunxulunyaniswa nokuphuculwa kokuqonda ngokupheleleyo kunye nokusebenza okulawulayo kwezinye kodwa hayi kuzo zonke izigulana. Uvavanyo olukhulu lwe-placebo olulawulwayo lweklinikhi lunyanzelekile ukuba kuvavanywe i-MGT njengoncedo olusebenzayo, olufikelelekayo ngokufikelelekayo nolufikelelekayo kubantu abane-AD.
Ukusebenza kunye noKhuseleko lweMMFS-01, iSynapse Density Enhancer, yokuNyanga ukuphazamiseka kwengqondo kubantu abadala: Isilingo esilawulwa ngokungahleliwe, esingaboni kabini, esilawulwa yiPlacebo.
Akunangxaki kakhulu ukufumana nawuphi na umcimbi kumnatha xa kuthelekiswa neencwadi, njengoko ndifumene eli nqaku kule webhusayithi.
Kuhle! Inqaku layo elimangalisayo, ndinombono ocacileyo ngokubhekisele kweli nqaku.
Magtein (L-threonate) Umbuzo wesisombululo？
Molo, ndiyazibuza ngabantu abakhe basebenzisa iMagtein okanye i-L-threonate kwixa elidlulileyo, zithini iidosi zabo ngosuku, ngakumbi ukuba bajikeleza phakathi kwezinye iindlela zemagniziyam.
Okwangoku, ndithatha i-3600mg ye-glycinate ngosuku (1800mg ekuseni, 1800mg ebusuku). Ngokutsho kwelebheli, ngaphezulu kwe-100% yexabiso lemihla ngemihla le-magnesium, kodwa lelona dosi ndiziva ndilungile kulo, njengoko lisusa uninzi lweekram kunye ne-spasms zemisipha.
Ndiyazibuza kwakhona, kuba i-2000mg yeMagtein yi-36% kuphela ye-magnesium yexabiso lemihla ngemihla, kwaye i-2000mg Magtein yi-MAXIMUM ekucetyiswa ngayo ngosuku, ngaba kunokwenzeka ukuba ufumane i-magnesium eyaneleyo ukusuka kwi-L-threonate, okanye abantu basebenzise ezinye iintlobo zemagnesium Ukongeza kwi-L-threonate, xa uthatha i-L-threonate?
Enkosi ngoncedo. Ixesha lokuqala ndizama uL-threonate kum.
Ndithathe i-ND's Magnesium L-Threonate powder malunga neenyanga ezili-10 ngoku, 1.0 - 1.2g mihla le. Ndiyisebenzisa njengesixhobo sokulala, kwaye isebenza ngokumangalisayo. Andinakuthi ndiqaphele naziphi na iziphumo ngaphandle kwalonto.
Umthombo we-Naturals Magnesium L Woyisile? I-Magnesium L I-Theronate inegunya lobunikazi ukuba iyinyani Mag. Ingayifomula efanayo ngaphandle kokuthengisa uphawu oluyithengisayo.
Imagnesium l threonate?
Ngokwazi kwam, i-l-threonate yindlela ekhuthaza i-neurotransmission yokucaca kunye nokugxila. I-Glycinate yoxinzelelo lomsipha / iicramps kunye noxinzelelo lwegazi. I-Citrate yokuzola kwaye inokunceda rhoqo.
Ndingafumana i-citrate ngenxa yeempawu ozichazileyo.
I-Magnesium yinto ebalulekileyo ye-electrolyte emzimbeni wakho ukuze uyifumane apho yonke imihla.